Yanamhlanje kwaye yamkelekile ... Yonke into iya kulunga! - I-Airbnb
Yanamhlanje kwaye yamkelekile ... Yonke into iya kulunga!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRaffaella
Indlu yethu ikumgangatho ophantsi kwaye ifikeleleka ngesango elizimeleyo. Yahlaziywa ngokupheleleyo kwiminyaka embalwa edlulileyo kwaye ngoku icocekile kwaye ilungele ukusingatha ithemba elizeleyo! Sihlala apho kuphela ngamaxesha amafutshane kakhulu, kodwa yenzelwe iindwendwe zethu, eyenzelwe abo bafuna ukumisa iintsuku ezimbalwa ukuze bazonwabisa okanye bathi molo.
Amagumbi anamhlanje anee-shades ezikhanyayo: ezimhlophe kunye nohlaza okwesibhakabhaka, i-beige kunye ne-grey, ezinceda ukuthuthwa kweemvakalelo ukufikelela kumbala wetyuwa kunye nolwandle olukhanyayo, olukhanyiswa ngokukhanya okufudumeleyo kwasekuseni. Izincedisi ezimbalwa kodwa zicingwe kakuhle ukunika intuthuzelo eyimfuneko ngaphandle kokuhlala kwiindawo ezisimahla eziyimfuneko kundwendwe.
Indawo yethu iyindawo yokuhlala kwaye izolile kakhulu. Amashumi ambalwa eemitha kude yiParco del Gelso, ipaki enkulu kamasipala enechibi embindini wokuloba, eneendlela zabo bathanda ukubaleka ukolula nokomeleza emoyeni. Ngaphambi kwe-lag, indawo yokudlala enhle yabantwana abancinci okanye abakhulu. Umgama ongemizuzu embalwa uhamba yivenkile enkulu kunye neemitha ezingamakhulu amathathu ukusuka elunxwemeni, ixhotyiswe kwaye isimahla.
Kuyandonwabisa ukunxibelelana neendwendwe kwaye ndizenze ndifumaneke ukuhlangabezana neemfuno zabo, ukuba kunokwenzeka kunjalo!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Igea Marina